Ebe nrụpụta sekit sekit | Ndị na -emepụta China na ndị na -ebugharị sekit
Usoro JV (GV) 0.1A-80A Circuit Breaker
A na -ejikarị JV (GV) usoro sekit sekit na -emebiga ihe ókè na mkpụmkpụ. Mkpuchi sekit maka motọ na sekit AC 50/60Hz. gosiri na voltaji na-arụ ọrụ ruru 660V gosiri na ọ na-arụ ọrụ ugbu a site na 0.1Ato 80A dị ka ndị na-ebido voltaji zuru oke ịmalite na bepụ motọ n'okpuru ibu Ac3 yana maka nchebe sekit na sekit nke 0.1A-80A.
DZ208 Motor Protection Circuit emebi
Ngwaahịa a dabara ka ejiri ya na sekit nke voltaji gosiri ruo AC 660V 50/60Hz, ụdị 0.1A dị ugbu a ruo 63A. Ọ na-adabara maka nchebe nke ibubata oke & obere okirikiri nke motors 3 squirrel-cage motors. Enwekwara ike iji ya dị ka onye mbido iji malite moto na ngbanwe maka ntụgharị sekit n'okpuru ọnọdụ nkịtị.
Ogwe mmiri na -agbazi agbazi agbaziri agbazi/MCCB PG
2fils 4 fils PG 10-30A 30-60A France disjoncteur 500mA onye na-emebi okirikiri
PG Ihe fọdụrụ ugbu a Circuit emebi
1.High ike imebi.
2.Modern, ihe nrụpụta ihe ọhụrụ
3.100%ule tupu izipu.
4. Ọnụ ahịa asọmpi & ọrụ aka ọrụ.
TG usoro mmezi ihe mgbapụta ugbu a dị mma maka AC 50/60Hz, 250/440V sekit, na-egbochi ibubiga oke ókè, obere okirikiri wdg. nchedo oke ibu ugbu a nwere ike ịhazigharị.
JVM8 PG 230V/400V ihe nkpuchi sekit ugbu a
Oghere ihe nkesa PG, site na 5 ruo 60 A, (1 Ph + N) ma ọ bụ (3 Ph + N), nwere ma ọ bụ na -enweghị nchebe mgbapụta ụwa (300 mA - 500 mA ma ọ bụ 650 mA), na -enye ngwaahịa kwesịrị ekwesị iji dabara nke ọ bụla. ụdị nwụnye.
Ọkpụkpụ fuuz anyị nwere ihe dị elu, ọ nwere ogologo ọrụ ndụ. A na -eme fusant ahụ site na eriri ọla kọpa dị ọcha. A na -eme ngwakọta nke ngwakọta nke china dị elu.
Oghere ihe nkesa PG, site na 5 ruo 60 A, (1 Ph + N) ma ọ bụ (3 Ph + N), nwere ma ọ bụ na -enweghị nchebe mgbapụta ụwa (300 mA - 500 mA ma ọ bụ 650 mA), na -enye ngwaahịa kwesịrị ekwesị dabara na nke ọ bụla. ụdị nwụnye.
JVM8 （PG） Usoro Kpụrụ Ọnọdụ Circuit Breaker
Oghere ihe nkesa PG, site na 5 ruo 60 A, (1 Ph + N) ma ọ bụ (3 Ph + N), nwere ma ọ bụ na -enweghị nchebe mgbapụta ụwa (300 mA - 500 mA ma ọ bụ 650 mA), na -enye ngwaahịa kwesịrị ekwesị iji dabara nke ọ bụla. ụdị nwụnye
JVM9 （TG） Series Kpụrụ Case Circuit emebi
Ogwe 2P, 4P
Voltaji gosiri (V) 250V/440V
Egosiri ugbu a (A) 10,15,20,25,30,45,50,60A Na -agbanwe
Mgbapu agbapụ dị ugbu a (MA) 300mA, 500mA
Oke mmiri ozuzo ugbu a (mA) 150mA, 250mA
Ọkọlọtọ NFC61450, IEC61008
JVM1 Series Kpụrụ Case Circuit emebi
JVM1 (CM1) Series Kpụrụ Case Circuit emebi
JVM1 usoro kpụrụ ihe sekit sekit bụ otu n'ime ngwaahịa etolitere ma rụpụta ya site na iji teknụzụ dị elu nke mba ụwa.Ọ na -enye ya 800V voltage insulating ma jiri ya mee ihe maka sekit AC50Hz, volta ọrụ na -arụ ọrụ AC 400V (ma ọ bụ n'okpuru), nke na -arụ ọrụ ugbu a ruo 800A maka na -agbanwe agbanwe ugboro ugboro na mmalite nke moto. Ngwaahịa ndị a na-emetụta IEC 60947-2 stamdard.